“မေမေတို့အတွက် ကိုယ့်ကလေးထမင်းအကုန်စားအောင်ပြင်ပေးနိုင်မယ့်ထမင်းဗူးးလှလှလေးများ” In:Kawi Eats
မိုးခိုဖို့ကောင်းတဲ့ ကော်ဖီဆိုင်ကောင်းကောင်းလေးများ In:Kawi Eats, Theme Restaurant
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောင့်ယှက်မှုကို သူမသမီးလေးကိုယ်တိုင် ကာကွယ်တတတ်စေဖို့ Super MaMa Thae ကဘာတွေပြောပြခဲ့သလဲ? In:Kawi Inspires, The Fit Slay Queens
အဖေမပါသော်လည်း အဖေများနေ့ကို ဘယ်လိုဖြတ်သန်းမလဲ? In:Kawi Inspires
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အသားယူခံရတဲ့အခါ ဘယ်သူပိုရှက်သင့်လဲ? In:Kawi Inspires, The Fit Slay Queens
ကြက်ပျားရည်အစပ်ကြော် In:Kawi Eats, Videos
တစ်ခါသုံး ပလတ်စတစ်ပစ္စည်းတွေအစား ဒါတွေကိုပြောင်းသုံးကြည့်ကြပါလား? In:Kawi Eats
သင့်ဘေးနားက လူ (၅) ယောက်က သင့်အပေါ် ဘယ်လိုသက်ရောက်မှုရှိနိုင်သလဲ? In:Kawi Inspires, Life Hacks, Movies | Books | Apps
ဝက်သားမျှစ်ချဉ်ချက်နည်း In:Kawi Eats, Videos
သင်နောက်ကျနေပြီထင်ရင်တောင် ဘယ်တော့မှမရပ်တန့်လိုက်ပါနဲ့ In:Kawi Inspires, Life Hacks, Others
ဒီလို မိုးအေးအေးလေးမှာ ရိုးရိုးကြက်ကြော်စားမယ့်အစား ရာသီဥတုနဲ့လိုက်မယ့် ပူပူစပ်စပ် “ကြက် ပျားရည်အစပ်ကြော်” ကိုအိမ်မှာ လုပ်စားကြည့်ဖို့ တင်ပေးလိုက်တယ်နော် 🤗🤗🤗 ...
မိုးက အစိုးမရပါဘူး(ကိုယ့်ချစ်သူလိုပါနော်)။ အပြင်သွားနေတုန်း ဘယ်လိုအချိန်မှာ မိုးရွာလာမလဲဆိုတာ မသိနိုင်တဲ့အတွက် မိုးခိုစရာနေရာလေးတွေ သိထားရင် ပိုပြီးတော့မကောင်းဘူးလား? အဲဒါကြောင့် အပြင်သွားတုန်းသွားခိုက် မိုးတွေရွာခဲ့တဲ့အခါ မိုးခိုရင်း ကော်ဖီကောင်းကောင်းလေးတစ်ခွက်အပြင် နေရာထူးထူးဆန်းဆန်းလေးတွေမှာ ဓာတ်ဖမ်းနိုင်တဲ့အတွက် မိုးရှောင်ဖို့အကောင်းဆုံးနေရာလေးတွေကို ကဝိကနေ ပြောပြပေးမယ်နော်! ၁) The Plant House Café ဒီ The Plant House Café မှာတော့ ကော်ဖီကောင်းကောင်းလေးတွေသာမကပဲ သဘာဝစိမ်းစိမ်းစိုစို အပင်လေးတွေနဲ့ စာအုပ်စင်လေးတွေကိုပါတွေ့ရမှာပါ။ အဲဒါကြောင့် မိုးရာသီမှာ တစ်ယောက်ထဲအေးအေးဆေးဆေးနဲ့ ကော်ဖီသောက်ရင်း စာအုပ်လေးတွေဖတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အပင်လှလှလေးတွေ၊ ကော်ဖီကောင်းကောင်းလေးတွေနဲ့ ဓာတ်ဖမ်းချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီကော်ဖီဆိုင်လေးကတော့ သွားဖို့သင့်တော်တဲ့ဆိုင်တစ်ဆိုင် လို့ပြောရင်မမှားလောက်ပါဘူး။ The Plant House Café ကတော့ အမှတ် (၃၃) ညောင်တုန်းလမ်း၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်မှာ ရှိတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ …………………………………………………………………………………………………. ၂) My House Café Yangon ဒီကော်ဖီဆိုင်လေးကတော့ ကော်ဖီကောင်းကောင်းလေးတွေအပြင် ထိုင်းအစားအစာတွေ၊ လတ်ဆတ်တဲ့အသီးဖျော်ရည်တွေနဲ့ အခြားအစားအသောက်တွေလည်း ရနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ထိုင်းအစားအစာတွေစားပြီး ကော်ဖီကောင်းကောင်းလေး သောက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အမှတ်(၅၇)၊ မင်းလမ်း၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်မှာ ရှိတဲ့ My House Café Yangon ကိုသွားကြည့်ကြဖို့ လက်တို့လိုက်ပါတယ်နော်။ …………………………………………………………………………………………………. ၃) Innwa Books & Café ဒီဆိုင်လေးက စာအုပ်ကိုရောကော်ဖီကိုပါ ချစ်တဲ့သူတော်တော်များများ ရောက်ဖြစ်ကြတဲ့ နေရာလေးတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာပလာဇာ ဒုတိယအထပ်မှာရှိတဲ့ ဒီ Innwa Books & Café မှာတော့ ကော်ဖီသောက်ရင်း မိမိတို့ကြိုက်တဲ့ စာအုပ်တွေဖတ်နိုင်သလို စာအုပ်လေးတွေနဲ့ ခပ်မိုက်မိုက်လေး ဓာတ်ဖမ်းလို့လည်းရတယ်လေ။ ဒါနဲ့ ဒီဆိုင်လေးကပိတ်ရက်တွေမှာ လူအရမ်းများတတ်တာကိုလည်း သတိရဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။ …………………………………………………………………………………………………. ၄) Easy Café ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ နာနတ်တောလမ်းမှာရှိတဲ့ Easy Café ကဆိုရင်တော့ ထိုင်လို့လည်းကောင်းပြီး အစားအစာတွေကလည်း အရမ်းအရသာရှိတဲ့ ဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ သီချင်းကောင်းကောင်းလေးတွေနဲ့ Wifi လည်းရတယ်ဆိုတော့ မိုးရာသီအေးအေးလေးမှာ မိုးခိုရင်း chill လုပ်ဖို့တော်တော်လေးကောင်းတဲ့ ကော်ဖီဆိုင်တစ်ဆိုင်လေးပေါ့။ …………………………………………………………………………………………………. ၅) Café Genius ဒီကော်ဖီဆိုင်လေးကတော့ တခြားကော်ဖီဆိုင်တွေ တော်တော်များများနဲ့မတူပဲ ထူးခြားမှုတစ်ခုရှိပါတယ်။ အဲဒါကတော့ သူတို့ကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်တဲ့ ကော်ဖီစေ့တွေကိုပဲ ဆိုင်မှာကြိတ်ပြီးပြန်ဖျော်တဲ့ ကော်ဖီဆိုင်လေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Local Product ကိုသာသုံးတဲ့ကော်ဖီဆိုင်လေးမှာ အရသာရှိတဲ့ကော်ဖီအပြင် သူတို့ကိုယ်တိုင်လုပ်တဲ့ Croissant, chocolate croissant, raspberry Danish, cake, cupcake အစရှိတဲ့ မုန့်မျိုးစုံကိုလည်းရရှိနိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆိုင်လေးရဲ့လိပ်စာကတော့ အမှတ် (၂၂၀)၊ ၃၁ လမ်းအပေါ်ဘလောက်၊ ပန်းပဲတန်းမြို့နယ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ …………………………………………………………………………………………………. ၆) Chinatown 125 Café ဒီဆိုင်လေးကလည်း မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပထမဆုံး China Theme လိုမျိုးပြင်ဆင်ထားတဲ့ ကော်ဖီဆိုင်လေး တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ Chinatown 125 Café ကိုတော့ လူစည်ကားတဲ့ China Town ၁၉လမ်းမှာဖွင့်ထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆိုင်မှာ အတွင်းရောအပြင်ပါ China Theme ပုံစံပြင်ဆင်ထားတာကို တွေ့ရမှာဖြစ်ပြီး ကော်ဖီမျိုးစုံအပြင် Asian အစားအစာအစုံကိုပါ ရရှိနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အစားဆန်းဆန်းလေးတွေ၊ ကော်ဖီကောင်းကောင်းလေးတွေ သောက်ရင်း ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ အရမ်းမိုက်တဲ့ဆိုင်မို့ သွားကြည့်ဖိို့အတွက် recommend ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ …………………………………………………………………………………………………. ၇) Freedom Café San Chaung ဒီတိုင်းကြီးကော်ဖီသောက်ရတာ ပျင်းနေပြီလား? အဲဒါဆိုရင်တော့ အမှတ်(၈၁)၊ ပန်းလှိုင်လမ်း၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ် မှာရှိတဲ့ Freedom Café San Chaung ကိုသွားဖို့ တိုက်တွန်းပါရစေ။ ဒီဆိုင်မှာတော့ ကော်ဖီသောက်ရင်း ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ခွေးတွေနဲ့ဆော့ကစားနိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မိမိတို့ကြိုက်တဲ့ ခွေးလေးတွေနဲ့လည်း ဓာတ်ဖမ်းလို့လည်းရတဲ့အတွက် ဒီဆိုင်လေးက သွားသင့်တဲ့ဆိုင်လေးတွေ ထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ …………………………………………………………………………………………………. ၈) Yangon Language Café ထူးထူးဆန်းဆန်းလေးတွေကိုမှ ကြိုက်တတ်ကြတဲ့သူတွေအတွက် စိတ်ဖိစီးနေတာတွေ ဖြေဖျောက်ရင်း တခြားဘာသာစကားတွေကို သင်ယူနိုင်ဖို့ ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ Yangon Language Café ရှိပါတယ်။ ဒီဆိုင်လေးကို လမ်းမတော် ၅လမ်း၊ အောက်ဘလောက်မှာ ဖွင့်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အပြင်မှာမိုးတွေရွာနေတုန်း ဒီ Language Café မှာ မိုးခိုဖို့အချိန်ဖြုန်းရင်း ကော်ဖီပူပူလေးတစ်ခွက်နဲ့ ဘာသာစကားတွေကိုပါ လေ့လာဆိုရတယ်ဆိုတော့ အခွင့်ကောင်းတစ်ခုပဲပေါ့။ ကဲဘယ်လိုလဲ? မိုးလဲခို၊ ကော်ဖီလည်းသောက်ပြီးတော့ ဘာသာစကားတွေကိုပါ အလကားလေ့လာလို့ရတယ်ဆိုတော့ မိုးခိုဖို့အသင့်တော်ဆုံးပဲပေါ့။ ………………………………………………………………………….. ၉) Hard Rock Café Yangon သင်ဟာ ကော်ဖီကောင်းကောင်းတစ်ခွက်ကို နှစ်သက်သူတစ်ယောက်လား? သင်ဟာ သီချင်းတွေကိုနှစ်သက်သူလား? ဒါဆိုရင်တော့ Hard Rock Café ကတော့ သွားကိုသွားဖူးသင့်တဲ့ ဆိုင်တစ်ဆိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆိုင်မှာ ကမ္ဘာတလွှားက ထင်ရှားတဲ့အဆိုတော်တွေရဲ့ အသုံးအဆောင်တွေကို ချိတ်ဆွဲပြီးပြထားတာကို တွေ့ရမှာပါ။ အဲဒါအပြင် live band တွေရဲ့ သီချင်းကောင်းကောင်းတွေ၊ rock သီချင်းကောင်းကောင်းတွေကို အမြဲကြားကြရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် သူငယ်ချင်းတွေနဲ့သာမက တစ်ယောက်တည်းလည်း သွားသင့်တဲ့ဆိုင်တစ်ဆိုင်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ …………………………………………………………………………………………………. ၁၀) Gloria Jean’s Coffees Myanmar ဒီဆိုင်လေးကတော့ သိပ်ပြောပြစရာမလိုတဲ့ လူတော်တော်များများလည်း သိလောက်မယ်ထင်ရတဲ့ ကော်ဖီဆိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Gloria Jean ကတော့ ကော်ဖီကောင်းကောင်းလေးတွေ တော်တော်များများရတဲ့အပြင် ဓာတ်ဖမ်းလို့လည်း တော်တော်ကောင်းတဲ့ ဆိုင်တစ်ဆိုင်ဆိုတာ မမှားပါဘူး။ ကိုယ့်ဟာကိုယ်တစ်ယောက်တည်း feel ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ chill ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အတွက်တော့ Gloria Jean ကအမိုက်ဆုံးပဲပေါ့နော်။ ...
“ဖေဖေလည်း ယောကျ်ားလေးပဲလေ” လို့ပြောလာတဲ့ သမီးစကားကို တုန့်ပြန်ဖို့ ကျွန်မဦးနှောက်တွေ ဘာလို့အလုပ်မလုပ်ပါလိမ့် ။ အခုတလောကြားနေရတာတွေက သက်ငယ်မုဒိမ်းမှုတွေ ကလေးငယ်လေးတွေကို sexual abuse လုပ်တဲ့ မှုခင်းတွေများလာပါတယ်။ ဒီသတင်းတွေကြားပြီး မိဘတွေလည်း ကိုယ့်ကလေးကိုယ် ကျောင်းတောင် စိတ်ဖြောင့်လက်ဖြောင့် လွှတ်ဖို့ခက်လာကြပါပြီ။ အထူးသဖြင့် သမီးမိန်းကလေး မွေးထားတဲ့မိဘတွေပေါ့။ အမေနဲ့ အဖေ ယှဉ်လာရင်တောင် မိခင်တွေက ပိုစိတ်ပူတတ်ကြတယ်မလား။ ကျွန်မ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့နေရာမှာ ယောက်ျားတစ်ယောက်လို သန်မာရင် သန်မာမယ်၊ စီးပွားရေးမှာ ထက်မြက်ရင်ထက်မြက်မယ်၊ တာဝန်ကျေပွန်တဲ့ အိမ်ရှင်မကောင်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်၊ သမီးလေးနဲ့ပတ်သက် လာရင် ကျွန်မရဲ့ မာကြောထက်မြက်မှုတွေ ပျောက်ဆုံးရစမြဲပါ။ ဒါကို သမီးလေးသဘောပေါက်ဖို့ အရမ်းစောနေပါသေးတယ်။ ဘာမဆို သမီးလေးအတွက် အကောင်းဆုံးလုပ်ပေးချင်တဲ့ မိခင်စိတ်အရ သမီးလေးလိုချင်တာ ဖြည့်ဆည်းပေးချင်လျက်နဲ့ ဖြစ်သင့်တာပဲလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ အခုလည်း မှုခင်းသတင်းတွေ ကြားနေရတော့ ကျွန်မ တော်တော်စိတ်ပူမိပါတယ်။ လူတွေကို ခင်တတ်တဲ့ ကျွန်မသမီးလေး မသမာသူတစ်ယောက်ယောက်ရဲ့ အခွင့်အရေးယူတာ မခံရစေချင်ဘူးလေ။ ဒါကို ကာကွယ်ဖို့ဆိုရင် သမီးလေးကိုယ်တိုင် မူမမှန်တဲ့အပြုအမူမျိုးဆိုတာ ဘာလဲဆိုတာသိဖို့လိုပါတယ်။ အစကတော့ သမီးလေးများအရမ်းငယ်နေသေးမလားလို့ တွေးမိပါသေးတယ်။ နောက်ပိုင်းဖြစ်တဲ့့့ဖြစ်ရပ် တွေက နှစ်နှစ်အရွယ်ကလေးတွေပါ ပါလာတော့ သမီးကို ကြိုတင်သတိပေးတဲ့အပြင် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှောင့်ယှက်တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောပြမှဖြစ်တော့မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ ၁။ ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရှင်းပြတာ ပထမဆုံး စပြောဖြစ်တာက private parts တွေအကြောင်းပေါ့။ ရင်ဘတ်နဲ့ မိန်းမကိုယ် နေရာတွေကို သမီးလေးသိလားလို့ မေးကြည့်တော့ ရှုရှုးပေါက်တဲ့နေရာတဲ့။ သမီးလေးကို ပြောပြထားတယ် အဲဒီနေရာတွေကို “ရှက်ရှက်” လို့ခေါ်ကြောင်းနဲ့ ဘယ်သူမှလာကိုင်တာ လက်မခံဖို့ပေါ့။ လာထိဖို့ကြိုးစားရင်လည်း ကျွန်မကို ပြန်ပြောဖို့အကြောင်းပေါ့။ စူးစမ်းတတ်တဲ့သမီးလေးက ပြန်မေးတယ် မေမေနဲ့ ဖေဖေရောတဲ့။ ကျွန်မ အကြပ်ရိုက်သွားပါတယ်။ သမီးကို မေမေနဲ့တီတီတို့က ရေခိိျုးသန့်ရှင်းရေးလုပ် ပေးတာကလွဲပြီး မကိုင်မယ့်အကြောင်း ပြောပြဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆို သမီးကိုယ်တိုင်ပဲ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရ မှာဖြစ်ကြောင်း ပြောထားရတာပေါ့။ …………………………….. ၂။ ယောကျ်ား၊ မိန်းမကွာခြားကြောင်း ဒါကို သမီးကိုရှင်းပြဖို့ ကျွန်မတော်တော် သတိထားလိုက်ရပါတယ်။ ပထမဆုံး အခက်အခဲကတော့ ခုနက သမီးလေးမေးလိုက်တဲ့ ဖေဖေရောဆိုတဲ့ မေးခွန်းပါ။ သမီးလေး သူ့အဖေကို ရှိန်မသွားစေချင်တာလည်း တစ်ကြောင်းပါ ပါတယ်။ ဖေဖေတင်မကဘဲ သမီးအရမ်းခင်တဲ့ ကိုကိုတွေ၊ ဦးဦးတွေပါ ယောကျ်ားလေးတွေ ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းပြရပါတယ်။ ကျောင်းမှာ ရွယ်တူသူငယ််ချင်းဖြစ်ဖြစ်၊ လူကြီးပဲဖြစ်ဖြစ် ယောကျ်ားလေးဖြစ်ကြောင်းနဲ့ သူတို့နဲ့ မိန်းကလေးတွေ သဘာဝမတူတဲ့အတွက် အလွန်အမင်း နီးနီးကပ်ကပ် မနေဖို့မှာရပါတယ်။ မှုခင်းတော်တော်များများမှာ ကလေးနဲ့ မြင်ဖူး၊ ရင်းနှီးဖူးတဲ့သူတွေ ကျူးလွန်တတ် တဲ့အတွက်ကြောင့် အခုလိုမှာဖြစ်တာပါ။ အဓိက ကတော့ private area တွေကို လာရောက် အကိုင်တွယ်မခံဖို့ မှာရပါတယ်။ ……………………………. ၃။ မူမမှန်တဲ့အပြုအမူမျိုးကို ရှင်းပြပါ။ အရင်က ကျွန်မနဲ့သမီးလေး ကာတွန်းကားတွေကြည့်လို့ နမ်းတဲ့အခန်းတွေပါလာရင် မျက်စိ မှိတ်လေ့ရှိပါတယ်။ အခုတော့ ကျွန်မနဲ့အတူ ကြည့်ခိုင်းရင်း ပြောပြဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ယောက်က သမီးရဲ့ ပါးစပ်ကိုနမ်းတာ သူတို့ပါးစပ်ကို နမ်းခိုင်းတာ၊ သူတို့ ရှက်ရှက်တွေကို ထိခိုင်းတာမျိုးရှိရင် မလုပ်ဖို့နဲ့ ကျွန်မကို ပြန်ပြောဖို့မှာရပါတယ်။ နောက်ပြီး သမီးမသိတဲ့ စကားလုံးတွေသုံးပြီး နေရခက်လောက် အောင်စနောက်ရင် ပြန်ပြောဖို့ လည်းမှာရပါတယ်။ …………………………….. ၄။ လူတွေကိုသတိထားဖို့ မသိတဲ့သူတွေဆီက ကျွေးတာမစားဖို့ မယူဖို့ပြောဖြစ်ပါတယ်။ မေမေခေါ်ခိုင်းတယ် ပြောတိုင်းလည်း လိုက်မသွားဖို့ရောပေါ့။ မေမေခေါ်ခိုင်းရင် စကားဝှက်ပြောခိုင်းလိုက်ဆိုပြီး စကားဝှက်လေးတွေ သင်ထားပေးဖြစ်ပါတယ်။ ……………………………… ၅။ တစ်ခုခုဆို ပြန်ပြောဖို့ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သမီးကို စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်အောင်လုပ်ရင်၊ ထိပါးဖို့ကြိုးစားရင် ဘယ်သူလုပ်လုပ် ပြန်ပြောဖို့ပါ။ သူငယ်ချင်းမိန်ကလေးတွေ ကြုံရရင်လည်း အသိပေးဖို့မှာဖြစ်ပါတယ်။ သမီးလေး နည်းနည်းကြီးလာရင်တော့ ဒီထက်ပိုပြီး မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးအကြောင်း ရှင်းပြဖြစ်မှာပါ။ နှစ်အနည်းငယ်မှာပဲ သမီးလေးကို ရာသီသွေးပေါ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြောပြရတော့မယ်။ နောက်ဆို ဘဝအကြောင်း၊ အိမ်ထောင်ရေးအကြောင်းတွေ ပြောပြရတော့မယ်။ သမီးလေး အသက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှ ပြောရမယ့်အကြောင်းအရာတွေ များလာတော့မယ်။ အခုချိန်မှာ သူ့အသိဉာဏ်လေးနဲ့ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ကာကွယ်တတ်စေချင်တဲ့အတွက် ကျွန်မသိသလောက် မျှှဝေပေးဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးတွေအမြင်မှာ မိဘတွေက သူတို့ရဲ့သူရဲကောင်းဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်။ ကျွန်မ သမီးလေးကိုတော့ သူ့ဘဝရဲ့ သူရဲကောင်းကို သူကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်စေချင်တာ ကျွန်မ မမှားဘူးထင်ပါတယ်။ ...
မိုးရာသီလည်းရောက်ပြီ၊ ကျောင်းတွေလည်းဖွင့်ပြီဆိုတော့ မေမေတွေအလုပ်ရှုပ်ပြီပေါ့။ မေမေတစ်ယောက်ဖြစ်ရတယ်ဆိုတာ superwoman ဖြစ်ရတာထက် ပိုခက်ပါတယ်နော်။ တစ်နွေလုံးလည်း သားသား၊ မီးမီးတွေကို ထိန်းရ၊ ကျောင်းဖွင့်တော့လည်း ကျောင်းတက်ဖို့ ပြင်ဆင်ပေးရ၊ ကြိုပို့ရနဲ့ မအားရပါဘူး။ အခန့်မသင့်ရင် စာတောင်ကူကျက်ပေးရသေးတယ်နော်။ အဆိုးဆုံးကတော့ တစ်နွေလုံး ကိုယ့် မျက်စိအောက်မှာရှိနေတဲ့ ကလေးတွေ ကျောင်းတက်နေရတော့ လွမ်းနေရမှာပါ။ ပြီးတော့ စူပါမေမေတွေ ခေါင်းအစားဆုံးကိစ္စကတော့ ထမင်းဗူးကိစ္စပဲပေါ့။ တစ်နေ့တစ်နေ့ ဟင်းမထပ်အောင်၊ ဂျီးများတဲ့ ကိုယ့်ကလေးစားချင်အောင် (မှတ်ချက် – ၉၉%သော ကလေးများသည် ဂျီးများတတ်ကြသည်။)၊ ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ နေ့လည်စာဖြစ်အောင် အချိန်မှီပြင်ဆင်ပေးရတယ်လေ။ ဒီကြားထဲ ကိုယ့်ကလေးက “မေမေ သမီးသူငယ်ချင်းရဲ့ထမင်းဗူးက မစ်ကီမောက်စ်ပုံလေး ဖော်ထားတာ သမီးထမင်းဗူးကကျ ရိုးရိုးကြီး” ဆိုပြီး နှုတ်ခမ်းလေးဆူပြီးတော့များ ပြောတာကိုကြားရင် ဒီမေမေမှာ မောပြီပေါ့နော်။ ကလေးပြောတာလည်း ဟုတ်သား။ သူလည်း ထမင်းဗူးလှလှလေး ယူသွားချင်ရှာမှာပေါ့။ အဲတော့ စူပါမေမေတစ်ယောက် ထမင်းဗူးအိုင်ဒီယာလှလှလေးတွ စဉ်းစားရပြီပေါ့။ ဘိုစာ အရမ်းဆန်သွားရင် ကလေး မစားမှာလည်း စိုးရသေးတယ်လေ။ ဒါကြောင့် စူပါမေမေ တွေအတွက် ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ထမင်းဗူးလှလှလေးတွေပြင်ဖို့ အသုံးဝင်မယ့် tips လေးတွေ နဲ့ lunchbox idea လေးတွေ share ပေးမယ်နော်။ အရင်ဆုံးစဉ်းစားရမယ့် အချက်တွေကတော့ • အဓိက အာဟာရ အုပ်စု (၃) ခုလုုံးမျှတအောင်ပါရမယ်။ ထမင်း၊ အသား၊ ငါး၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ အဆီဓါတ် စသဖြင့် စုံအောင်ထည့်ပေးရမယ်။ • ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေသုံးပေးရမယ်။ (ဟင်းချက်ရာတွင်ပါ၀င်သော ပစ္စည်းများသာမက ထမင်းဘူး၊ ရေဘူး၊ အိုးခွက် စတာတွေပါ ကျန်းမာရေး နှင့်ညီညွတ်တာတွေကို သုံးပေးသင့်ပါတယ်။) • ၀ယ်ယူရလွယ်ကူသော ပစ္စည်းများကိုသာသုံးပါ။ • ကလေး ကြိုက်တာမျိုးချက်ပါ။ • ကလေးတွေ သဘောကျစွဲလမ်းတဲ့အရာမျိုး၊ ကာတွန်းဇာတ်ကောင်မျိုးကို အခြေခံပြီး idea ယူပါ။ ဒါဆို ကို်ယ့်ကလေး ထမင်းမစားမှာ၊ ထမင်းဗူးမလှမှာ မပူရတော့ဘူးပေါ့နော်။ ကာတွန်းပုံ ထမင်းလုံးလေးတွေလုပ်မယ်။ ဒီနည်းကတော့ ထမင်းကြိုက်သူလေးများအတွက်ပေါ့။ ထမင်းဖြူ၊ ထမင်းဝါ စသဖြင့် ထမင်းလုံးလေးတွေကို ကာတွန်းပုံ၊ ကားပုံ၊ ပန်းပွင့်ပုံ စသဖြင့်ပုံဖော်တာပါ။ မျက်လုံး၊ ပါးစပ်၊ အင်္ကျီ စတာတွေကိုတော့ ကြက်ဥ၊ မုုန်လာဥနီ၊ ရေညှိခြောက်၊ ကြက်အူချောင်း စတာတွေသုံးပြီး ပုံဖော်လို့ရပါတယ်။ ထမင်းကို အရသာအမျိုးမျိုး လုပ်လို့ရပါတယ်။ – အာလူးထမင်း – ထမင်းဝါ ( ထမင်းဖြူ ကို ကြက်သွန်နီနှင့် နံနွင်း ဆီသတ်ပြီးနယ် လို့ရပါတယ်၊ ငါးပုပ်ခြောက်နည်းနည်းထည့်နယ် ရင်ပိုမွှေးပါတယ်) – ငါးထမင်း – ပဲထမင်း – ခရမ်းချဉ်သီးနှစ်ထမင်း စသဖြင့်ပေါ့။ ပြီးရင်တော့ ကိုယ်ဖော်ချင်တဲ့ပုံလေးတွေ ဖော်လို့ရပါပြီ။ Pikachu, rilakkuma, minion, flower, little chicken အစရှိတာလေးတွေက ပုံဖော်ရလွယ်ပါတယ်။ ကြက်ဥပြင် လုပ်ဖို့ကိုတော့ ကြက်ဥကို ဆား၊ ငရုပ်ကောင်းနည်းနည်းထည့်ပါ။ သေချာခေါက်မွှေပြီး ဒယ် အိုးထဲမှာ အချပ်ပါးပါးရအောင် အပူပေးပါ။ ပြီးရင် လိုသလိုညှပ်ပြီး အလှဆင်လို့ရပါပြီ။ ၁။ pikachu ထမင်းဗူး ကြက်ဥထမင်းကြော် (သို့) အာလူးထမင်းနယ်ကို ထမင်းဗူး တစ်ဝက်ထည့်ပါ။ ရေညှိပြား နှင့် မုန်လာဥနီ ကိုသုံးပြီး pikachu မျက်နှာပုံ ဖော်ပေးပါ။ ကျန်ထမင်းဗူး တစ်ဝက်ကို ကြက်အူချောင်းကြော်နဲ့ ကြက်ဥလိပ်ကြော်လေး ထည့်ပေးပါ။ အမြင်လှသလောက် လုပ်ရတာလွယ်ကူတဲ့ ထမင်းဗူးလေးဖြစ်ပါတယ်။ …………………………………………………………………………………………………. ၂။ Spaghetti နှင့် sausage ထမင်းဗူး Sausage ကို တစ်လက်မအရွယ် အတုံးလေးများတုံးပါ။ sausage တစ်တုံးလျှင် spaghetti ချောင်း (၂) ချောင်း၊ (၃) ချောင်း ခန့်ထည့်ပြီး ပြုတ်ပါ။ spaghetti ကျက်ရင် ဆီအနည်းငယ်ဖြင့် ဆား၊ ငရုပ်ကောင်းထည့်ပြီး ပြန်ကြော်ပေးပါ။ ပြီးရင် အပေါ်လေးကနေ နံနံပင်လေးအုပ်ပေးလိုက်ပေါ့နော်။ …………………………………………………………………………………………………. ၃။ Meatballs lunchbox ဒီ ထမင်းဗူးးလေးကတော့ အသားလုံးကြော်လေးတွေနဲ့ ထမင်းလုံးကို ကျားပုံဖော်ထားတာပါ။ ကြက်သား (သို့) ၀က်သားစင်းကော အနည်းငယ်ကို ဆား၊ ပဲငံပြာရည်၊ ကော်မှုန့် အနည်းငယ်နဲ့နယ်ပြီး ကြော်ထားတာပါ။ …………………………………………………………………………………………………. ၄။ Kimbap ထမင်းလိပ် ကိုရီးယားရုပ်ရှင်တွေ ခေတ်စားနေတဲ့အချိန်မှာ ကိုရီးယားထမင်းလိပ်လေးတွေ ပြင်ပေးရင် ကလေးတွေထမင်းပိုစားအောင် ဆွဲဆောင်နိုင်မှာ အသေအချာပါပဲ။ ထမင်းကို ဆား၊ ကြက်သားမှုန့်နဲ့နယ်ပါ။ ဆူရှီလိပ်တဲ့ ဝါးပြားပေါ်မှာ ရေညှိပြားခင်းပါ။ ထမင်းကို ရေညှိပြားပေါ်မှာ ဖြန့်ခင်းပါ။ မုန်လာဥနီ၊ ကြက်ဥလိပ်၊ ကြက်အူချောင်း စသဖြင့် နှစ်သက်ရာဟင်းအမည်ထည့်ပြီးလိပ်နို်င်ပါတယ်။ ထမင်းလိပ်လေးတွေကိုအနေတော်လှီးပြီး ထမင်းဘူးထဲ စီထည့်ရင် ရပါပြီ။ အခုဖော်ပြထားတဲ့ ထမင်းဗူး idea လေးတွေက ပြင်ဆင်ရလွယ်ကူပြီး သားသား၊ မီးမီးတို့ ကြိုက်နှစ်သက် မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ စူပါမေမေတို့လည်း ကလေးတွေကို အပြင်စာ စားမှာမပူရဘဲ ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ ထမင်းဗူးးလှလှလေးတွေ ပြင်ပေးလို့ရတော့ အဆင်ပြေတာပေါ့နော်။ တခြား idea လေးတွေရှိရင် လည်း ဒီ post အောက် မှာ comment ပေးပြီး idea လေးတွေဖလှယ်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။ ဒီလိုချစ်စရာကောင်းပြီး ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့အပြင် Microwave Safe ဖြစ်တဲ့ (BPA Free) Lock & Lock ထမင်းဘူးလေးတွေကိုတော့ Lock & Lock Showroom များနှင့် နှီးစပ်ရာ Ocean, City Mart, Marketplace ဆိုင်တွေမှာ ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်။ – Y ...
အဖေများနေ့၊ အမေများနေ့နဲ့ တခြားသော မိသားစုနဲ့တိုက်ဆိုင်တဲ့နေ့တွေဟာ ကျွန်တော်တို့လို မိသားစုနဲ့အဆင်မပြေ၊ မရင်းနှီးတဲ့သူတွေအတွက်ဆို ဖြတ်သန်းဖို့အရမ်းခက်ခဲတဲ့နေ့တွေပါပဲ။ အမှန်မှာတော့ ကျွန်တော်တို့တွေအများစုရဲ့ မိဘတွေက သက်ရှိထင်ရှားမရှိတော့တာတွေ၊ ခက်ထန်ကြမ်းတမ်းတာတွေ၊ အတူတကွ မနေထိုင်တော့တာတွေ ရှိတတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဖေများနေ့ကို ကျွန်တော်တို့ဖြတ်သန်းဖို့ အကြောင်းဖန်လာတဲ့အခါ ကျွန်တော်တို့တွေက ဂရုမစိုက်ဘဲနေလိုက်တာမျိုးတွေ၊ အဖေ့အကြောင်းတွေ ပြန်စဉ်းစားပြီး မကောင်းမြင်နေတာမျိုးတွေ လုပ်မိတတ်ကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့တွေမှာ ကောင်းမွန်တဲ့ ဖခင်နဲ့သားသမီးဆက်ဆံရေးမရှိတာဟာ ကျွန်တော်တို့ထင်သလို ပြဿနာကြီးကြီးမားမား မဟုတ်တာကြောင့် ရှက်ရွံနေစရာ၊ ဖုံးကွယ်နေစရာမလိုပါဘူး။ အဆုံးမှာတော့ ကျွန်တော်တို့တွေမှာ လူတကာငေးလောက်စရာ ဖခင်နဲ့ဆက်ဆံရေး ရှိသည်ဖြစ်စေ၊ မရှိသည်ဖြစ်စေ ကိုယ်ပိုင်လမ်းကိုလျှောက်လှမ်းရပြီး၊ သင်ခန်းစာတွေကို ကိုယ်တိုင်သင်ယူရမှာပဲလေ။ မိမိ အဖေမပါဘဲ အဖေများနေ့ကို ဘယ်လိုဖြတ်သန်းရမလဲဆိုတော့ – ၁) ကိုယ့်ကိုယ်ကို ချစ်ပေးပါ။ ဘာကိုမှသေချာဂရုမစိုက်ဘဲ social media မှာ တင်ချင်ရာတင်နေတဲ့ခေတ်ကြီးထဲမှာ ကျွန်တော်တို့တွေဟာ လက်ညှိုးထိုးမလွဲ မြင်တွေ့နေရတဲ့ သူတို့တွေရဲ့အဖေတွေနဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေအကြောင်း စာတွေ၊ ပုံတွေကနေ လွတ်မြောက်အောင် စွမ်းဆောင်နေကြရပါတယ်။ တခြားကလေးတွေရဲ့နေထိုင်မှုတွေမှာ သူတို့ကို ချစ်ပေး၊ ဂရုစိုက်ပေးတဲ့ အံ့သြစရာကောင်းတဲ့ အဖေတွေရှိသေးတယ်ဆိုတာ သိရတာ ၀မ်းသာစရာကောင်းပေမယ့် ထိုအရာတွေ မြင်ရတာ စိတ်မသက်သာရာ၊ ၀မ်းနည်းရာရောက်တယ်ဆိုရင် ထိုနေ့တွေမှာ တခြားဘာမှတွေးမနေဘဲ ကိုယ့်ကိုကိုယ်သာ ပိုချစ်၊ ပိုဂရုစိုက်ပေးလိုက်ပါ။ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ကော်ဖီဆိုင်လေးသွားပြီး စာအုပ်လေးဖတ်နေတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်၊ တစ်နေကုန် shopping ထွက်လိုက်တာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အရာမျိုးလေးတွေလုပ်ပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဂရုစိုက်လိုက်ပါ။ ၂) အကောင်းဘက်ကနေ မြင်ကြည့်လိုက်ပါ။ သင့်အဖေနဲ့ သင့်ကြားမှာ စိတ်ထိခိုက်စရာဆက်ဆံရေးမျိုးရှိနေပြီး နှစ်ယောက်ဟာ စကားမပြောကြတဲ့ ဆက်ဆံရေးမျိုးဖြစ်နေကြတယ်ဆိုရင်တောင် သင့်ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေ၊ ကြင်နာမှုတွေကို သင့်အဖေဆီပို့ဖို့ သင်အမြဲရွေးချယ်လို့ရပါတယ်။ ဒေါသတွေ၊ မာနတရားတွေကို မကျေချမ်းပေးနိုင်ဘဲ လက်ကိုင်ထားမယ်ဆိုရင် သင်ကိုယ်တိုင် အဆိပ်တောက်တစ်ခုဖြစ်လာရုံကလွဲပြီး ကျန်တာဘာမှဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ၃) အဖေ့ရဲ့အမှားတွေဆီကနေ သင်ယူပါ။ ကျွန်တော်တို့တွေဟာ မထင်မှတ်ထားဘဲနဲ့ မိဘတွေဆီကနေ ကောင်းတဲ့အကျင့်တွေ (သို့) မကောင်းတဲ့အကျင့်တွေ အမွေရလာတဲ့အခါ “ငါ ငါ့အဖေအတိုင်းဖြစ်နေပြီ” “ငါ ငါ့အမေလိုဖြစ်နေပြီ” လို့ စိုးရိမ်ပူပန်စွာတွေးတတ်လာကြပါတယ်။ ကောင်းတဲ့အကျင့်တွေရလာရင် ဂုဏ်ယူနေတတ်ကြမှာ မှန်ပေမယ့်၊ မကောင်းတဲ့အကျင့်တွေရလာရင် သူတို့ပုံစံအတိုင်းဖြစ်လာမှာကို ပူပင်ကြပါတယ်။ အဲ့ဒီအခါ ကိုယ့်အဖေလုပ်ခဲ့တဲ့ အမှားတွေကို သေချာပြန်တွေးကြည့်ပြီး သင့်အလှည့်ကျရင်လည်း သင့်ရဲ့ကလေးတွေအပေါ် အဲဒီလိုမပြုမူမိအောင် သတိထားကြည့်ပါ။ သင့်ကလေးတွေကိုလည်း သင်ခံစားခဲ့ရသလို မခံစားစေချင်ဘူးမလား? ၄) ကိုယ့်အတွက် မိဘတွေလို အရေးပါတဲ့သူတွေကို အသိမှတ်ပြုပေးပါ။ အခြေခံအားဖြင့်တော့ အဖေများနေ့ဆိုတာ ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ တကယ့်အဖေတွေကို ဂုဏ်ပြုတဲ့နေ့တစ်နေ့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သင့်ကို အမေတစ်ယောက်တည်းက ပြုစုပျိုးထောင်ခဲ့တာဖြစ်နိုင်သလို၊ သင့်ရဲ့ချစ်သူကလည်း သင့်အတွက် မိဘလိုရပ်တည်ပေးနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဆိုတော့ကား အဖေဆိုတဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်က ကိုယ့်သူငယ်ချင်းရဲ့အဖေလို့လည်း ဆိ်ုချင်ဆိုနိုင်သလို၊ ကိုယ့်ရဲ့ဆရာလည်းဖြစ်နိုင်တာကြောင့် ကိုယ်အနားက ဘယ်သူ့ကိုမဆို တန်ဖိုးထားနိုင်ပါတယ်။ သင့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ နူးညံတဲ့အဖေတွေ၊ သူ့ကလေးတွေအတွက် အလုပ်အရမ်းကြိုးစားတဲ့အဖေတွေ ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သင့်ဆီမှာ သူတို့လိုမျိုး ကိုယ့်အတွက် အဖေကဏ္ဍ ကနေပါ၀င်ပြီး ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေ မျှဝေပေးနေတဲ့သူတွေအတွက် အဖေများနေ့မှာ ဂုဏ်ပြုပြီး ချစ်ခင်ပေးဖို့ နည်းလမ်းလေးရှာကြည့်ကြည့်ပါလား? ကျွန်တော်တို့တွေမှာ အဖေနဲ့ဆက်ဆံရေးမပြေလည်တာတွေရှိနိုင်ပေမယ့်လည်း ဘဝဆိုတာ သင့်အပေါ်ဘယ်အရာတွေကျရောက်လာသလဲဆိုတာနဲ့မဆုံးဖြတ်နိုင်ပါဘူး၊ သင့်အပေါ်ကျရောက်လာတဲ့အရာတွေကို သင်ဘယ်လိုတုံ့ပြန်သလဲဆိုတာပဲ မူတည်ပါတယ်။ ဟုတ်တယ်မလား?? Reference : https://www.goalcast.com/2019/06/05/how-to-celebrate-fathers-day-without-your-dad/?fbclid=IwAR1MCfUM7wXCI8w9zjjXIVgNKpqT1VbCa6WmAAPJzTI1rr0bPyHiFrggPPE ...
ပူပူစပ်စပ်လေးကြိုက်သူတွေနဲ့ မိုးအေးအေးလေးမှာ ပူပူလေးစားချင်သူတွေအတွက် ဝက်သားမျှစ်ချဉ်အစပ်ချက်နည်းလေးကို ကဝိကနေ တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်! အသုံးပြုထားတဲ့ ပါဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးကို City Mart Supermarket မှာဝယ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျ! ...
သင်တို့နေ့စဉ်နေ့တိုင်း အသုံးပြုနေတဲ့ ပလတ်စတစ်ပစ္စည်းတွေမှာ အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေတဲ့ chemical တွေအများအပြား ပါ၀င်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ဒီပလတ်စတစ်ပစ္စည်းတွေကို ရေရှည်ဆက်ပြီး အသုံးပြုနေမယ်၊ အစားအစာအပူတွေထည့်တဲ့နေရာမှာ သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ မိမိတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်ရုံသာမက သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုပါ ညစ်ညမ်းပျက်စီးစေနိုင်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ဒီမှာပလတ်စတစ်ပစ္စည်းတွေအစား အခြားဘယ်လိုပစ္စည်းတွေကို အစားထိုးပြီးသုံးကြမလဲ ဆိုတာကိုဖော်ပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ………………………………………………………………………….. ကျွန်တော်တို့တွေ နေ့စဉ် အစားအစာ၊ ပစ္စည်းတွေဝယ်တဲ့နေရာမှာ တော်တော်များများသုံးနေကြတဲ့ တစ်ခါသုံးပလတ်စတစ်အိတ်တွေနဲ့ ကြွပ်ကြွပ်အိတ်တွေကို တတ်နိုင်သလောက် ကြိုးစားပြီးလျှော့သုံးဖို့ လိုလာပါပြီ။ ဒီတစ်ခါသုံးပလတ်စတစ်အိတ်တွေ၊ ကြွပ်ကြွပ်အိတ်တွေမှာ BPA လို့ခေါ်တဲ့ ကင်ဆာဖြစ်စေနိုင်တဲ့ ဓာတုကုန်ကြမ်းပစ္စည်းတွေပါ၀င်တာကြောင့် ပူတဲ့အစားအစာတွေ ရေရှည်ထည့်သုံးနေမယ်ဆိုရင် ကျန်းမာရေးထိခိုက်စေနိုင်တဲ့အပြင် ပတ်ဝန်းကျင်မှာပါ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေတိုးများစေပြီး ညစ်ညမ်းပျက်စီးမှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်လာစေနိုင်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် စျေးဝယ်ထွက်တဲ့အခါတွေ၊ အစားအစာဝယ်တဲ့အခါတွေမှာ တစ်ခါသုံးပလတ်စတစ်ပစ္စည်းတွေအစား စတီးလ်ချိုင့်တွေနဲ့ ရေရှည်ပြန်ပြီးအသုံးပြုလို့ရတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို အစားထိုးအသုံးပြုသင့်ပါတယ်။ ………………………………………………………………………….. နောက်ထပ်တစ်ချက်ကတော့ သင်တို့နေ့စဉ်အသုံးပြုနေတဲ့ ပလတ်စတစ်နဲ့လုပ်ထားတဲ့ ဇွန်း၊ ခက်ရင်း၊ တူတွေနဲ့ တခြားမီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းတွေကို သစ်သား ဒါမှမဟုတ် စတီးလ်ပစ္စည်းတွေနဲ့ အစားထိုးအသုံးပြုသင့်ပါတယ်။ အဲဒါအပြင် သင်တို့နေ့စဉ်အသုံးပြုနေတဲ့ သောက်ရေဘူးတွေ၊ အချိုရည်ဘူးတွေ အစရှိတဲ့တစ်ခါသုံး ပလတ်စတစ်ဘူးတွေနေရာမှာလည်း စတီးလ်ဘူးတွေနဲ့ ရေရှည် ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်တဲ့ ရေဘူးတွေကို အစားထိုးပြီးအသုံးပြုသင့်ပါတယ်။ တစ်ခါသုံးရေသန့်ဘူးတွေ၊ အချိုရည်ဘူးတွေကလည်း ပတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညမ်းမှုကို ဖြစ်စေတဲ့အရာတွေထဲမှာ အများဆုံးပါ၀င်နေပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ရုံးသွား၊ ကျောင်းသွားနဲ့ အပြင်သွားတဲ့အခါတွေမှာ တစ်ခါသုံးပလတ်စတစ်ဘူးတွေကို အမြဲဝယ်ပြီးသုံးနေမယ့်အစား ကိုယ်ပိုင်ဘူးလေးတွေသယ်သွားရင် ပိုပြီးအဆင်ပြေမှာပါ။ ………………………………………………………………………….. Lock & Lock လိုမျိုး BPA (Free) Plastic တွေနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ ထမင်းဘူးတွေ၊ ရေဘူးတွေကတော့ ဒီတစ်ခါသုံးပလတ်စတစ်ပစ္စည်းတွေ နေရာမှာအစားထိုးပြီး အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ BPA မပါ၀င်တဲ့ ပစ္စည်းတွေကိုပြောင်းပြီး အသုံးပြုတာက ကျန်းမာရေးထိခိုက်မှာကို မပူစေရဘဲ အစားအစာအပူတွေထည့်စားတာမျိုး၊ အစားအစာတွေကို ရေခဲသေတ္တာထဲ ထည့်သိမ်းတာတွေနဲ့ microwave ထဲထည့်နွေးတာတွေပြုလုပ်လို့ရတဲ့အတွက် ရေရှည်ပြန်လည်အသုံးပြုလို့ရတာကြောင့် တစ်ခါသုံးပလတ်စတစ်ပစ္စည်းတွေထက် ပိုပြီးသုံးဖို့သင့်တော်ပါတယ်။ ဒီပစ္စည်းတွေက တစ်ခါသုံးပလတ်စတစ်ပစ္စည်းတွေလိုမဟုတ်ဘဲ အကြိမ်ကြိမ်ပြန်သုံးနိုင်ပြီး ပစ္စည်းပုံစံအမျိုးမျိုးကို ရွေးချယ်နိုင်တာကြောင့် အပြင်သွားတဲ့အခါတွေမှာလည်း သယ်ယူသွားလို့အဆင်ပြေပါတယ်။ ………………………………………………………………………….. အခုဆိုရင်ကမ္ဘာပေါ်က ကုန်တိုက်တော်တော်များများတွေမှာ ပလတ်စတစ်အိတ်တွေ အသုံးပြုတာကိုလျော့ချပြီး တခြားပစ္စည်းတွေနဲ့ အစားထိုးအသုံးပြုလာကြတာကို တွေ့ကြရမှာပါ။ ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း City Mart လိုမျိုးကုန်တိုက်တွေမှာ No Plastic Day ပြုလုပ်ပြီး အဲဒီနေ့မှာ ပလတ်စတစ်အိတ်မပေးတာကို တွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်သင်တို့လည်း အပြင်သွားပြီးစျေးဝယ်ထွက်တဲ့အခါတွေမှာ သင်တို့ဝယ်ပြီးသားပစ္စည်းတွေကို ပလတ်စတစ်အိတ်တွေနဲ့ ထည့်မယ့်အစား recycle အိတ်တွေ၊ စက္ကူပုံးတွေ စတဲ့တခြားပစ္စည်းတွေနဲ့ အစားထိုးသုံးကြပြီး ပလတ်စတစ်အသုံးပြုမှုကို တစ်ပိုင်တစ်နိုင်လျှော့ချနိုင်ပါတယ်။ ………………………………………………………………………….. နောက်ဆုံးအနေနဲ့ သင်တို့အသုံးပြုပြီးတဲ့ ပလတ်စတစ်အိတ်တွေ၊ ကြွပ်ကြွပ်အိတ်တွေနဲ့ ရေသန့်ဘူးတွေကို သုံးပြီးတိုင်း လက်လွတ်စပယ် လွှင့်ပစ်တာထက်စာရင် သေသေချာချာစနစ်တကျ အမှိုက်ပုံးထဲကို စည်းကမ်းရှိရှိစွန့်ပစ်သင့်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခါသုံးပလတ်စတစ် ပစ္စည်းတွေက ပျက်စီးဆွေးမြေ့ဖို့ မလွယ်ကူတဲ့အတွက် စနစ်တကျစွန့်ပစ်မှသာ ပြန် recycle လုပ်ပြီးအသုံးပြုနိုင်မှာပါ။ ဒီအတိုင်း လက်လွတ်စပယ် လမ်းမှာလွှင့်ပစ်လိုက်တဲ့အခါ ဒီပစ္စည်းတွေက ရေမြောင်းတွေ၊ ချောင်းတွေမှာ စုပြီးပိတ်သွားတတ်တဲ့အပြင် ပတ်ဝန်းကျင်ကို ညစ်ညမ်းပျက်စီးစေပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် မိမိတို့အသုံးပြုပြီးတဲ့ ပလတ်စတစ်ပစ္စည်းတွေကို အလွယ်တကူမပစ်လိုက်ဘဲ စည်းကမ်းရှိရှိအမှိုက်ပုံးတွေမှာ သွားရောက်စွန့်ပစ်ကြဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ ………………………………………………………………………….. ပလတ်စတစ်အသုံးပြုမှုက ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာသာမက ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံးမှာပါ တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ မြင့်တက်လာတာကို တွေ့ကြရမှာပါ။ ပလတ်စတစ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေက သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ညစ်ညမ်းပျက်စီးစေတဲ့အပြင် ပျက်စီးဆွေးမြေ့ဖို့လည်း ခက်ခဲလှပါတယ်။ ပလတ်စတစ်ကို မီးရှို့ဖျက်ဆီးတဲ့အခါမှာလည်း လေထုကိုညစ်ညမ်းစေရုံသာမက မီးရှို့ရာကနေ ထွက်လာတဲ့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်တွေကို ရှုရှိက်မိရင် ကင်ဆာနဲ့ အသက်ရှုလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါတွေကိုပါ ရရှိစေနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် ပလတ်စတစ်ကိုအသုံးပြုတာက လူသားတွေကို အကျိုးမပြုဘဲဆိုးကျိုးကိုသာဖြစ်စေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပလတ်စတစ်ပစ္စည်းတွေကို အသုံးပြုပြီးတဲ့အခါတွေမှာ စနစ်တကျစွန့်ပစ်ကြဖို့နဲ့ တတ်နိုင်သလောက် တခြားပစ္စည်းတွေနဲ့ အစားထိုးအသုံးပြုကြဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ -NaNa- ...
လူတစ်ယောက်ကို သူနဲ့ပေါင်းလေ့ရှိတဲ့ လူတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ သူဟာဘယ်လိုလူဖြစ်သလဲဆိုတာကို ဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်လို့ ပြောကြပါတယ်။ သင်ရွေးချယ်ထားတဲ့ အပေါင်းအသင်းတွေက သင့်ရဲ့အပြုအမူတွေ၊ အကျင့်စရိုက်လက္ခဏာတွေကို ပြောင်းလဲစေနိုင်တယ်ဆိုတာကို သင်သတိထားမိပါသလား? သင်ရဲ့ တစ်နေ့တာလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာ သင်နဲ့အတူ အမြဲတမ်းလိုလို အချိန်ကုန်ဆုံးလေ့ရှိတဲ့ လူ (၅) ယောက်လောက်က သင့်ရဲ့ အပြုအမူတွေကို လွှမ်းမိုးမှုရှိနေပြီး သင့်ရဲ့တိုးတက်မှုကိုသာမက နိမ့်ကျမှုကိုပါ ဖြစ်စေနိုင်လောက်တဲ့အထိ ပြောင်းလဲစေနိုင်တယ်ဆိုတာကိုတော့ သင်သတိမထားမိလောက်ပါဘူး။ အဲဒါကြောင့် သင်နေ့စဉ်သွားလာလှုပ်ရှားမှုတွေမှာ သင်နဲ့အတူရှိနေမယ့်သူတွေကို ဘယ်လိုမျိုးရွေးချယ်ပြီး ဆက်ဆံပေါင်းသင်းမလဲဆိုတာကိုတော့ အထူးဂရုပြုသင့်ပါတယ်။ သင်တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ သင်တို့နဲ့ အမြဲလိုလိုပေါင်းသင်းနေတဲ့သူတွေက သင့်ရဲ့ အပြုအမူတွေ၊ စိတ်နေသဘောထားတွေအပေါ် လွှမ်းမိုးနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံမှာသူတို့ရဲ့ အပြုအမူတွေ၊ အတွေးအခေါ်တွေနဲ့ ပြောပုံဆိုပုံတွေဟာ တဖြည်းဖြည်းသင့်ဆီကူးစက်လာပြီး သင့်ကိုပြောင်းလဲလာစေပါတယ်။ ဟားဗတ်တက္ကသိုလ်ရဲ့ လူမှုရေးစိတ်ပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Dr. David McClelland ရဲ့သုတေသနတွေကလည်း သင်တို့အနားမှာရှိတဲ့ အပေါင်းအသင်းတွေရဲ့လွှမ်းမိုးမှုတွေက သင့်ရဲ့အောင်မြင်မှု/ရှုံးနိမ့်မှုတွေရဲ့ ၉၅ ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိတယ်ဆိုတာကို တွေ့ရပါတယ်။ သင့်ရဲ့အပေါင်းအသင်းတွေက စာကြိုးစားတတ်တဲ့သူတွေ ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ သင်ဟာလည်း စာကြိုးစားနေမိမှာဖြစ်သလို သင့်ဘေးနားမှာရှိတဲ့ သင်နဲ့ပေါင်းနေကျလူတွေဟာ ပေါ့ပျက်ပျက်နေတတ်တဲ့သူတွေဆိုရင် သင်ဟာလည်းအလိုအလျောက် ပေါ့ပျက်ပျက်နေတတ်တဲ့ လူတစ်ယောက်အဖြစ် တဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာပါလိမ့်မယ်။ အဲဒါကြောင့် သင်တို့ရဲ့ အိပ်မက်တွေ၊ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်တွေက အခုလက်ရှိ ရောက်ရှိနေတဲ့ သင့်ပတ်ဝန်းကျင်ထက်ပိုပြီးတော့ ကြီးမားနေမယ်ဆိုရင်တော့ တခြားနေရာကိုပြောင်းပြီး သင့်စိတ်ကူးအိပ်မက်တွေကို ကြိုးစားပြီးအကောင်အထည်ဖော်သင့်ပါတယ်။ သင်တို့လက်ရှိပေါင်းသင်းနေတဲ့လူတွေဟာ သင့်အိပ်မက်တွေအကောင်အထည်ဖော်တဲ့နေရာမှာ အဟန့်အတားဖြစ်စေတာမျိုး၊ ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေတာမျိုးဆိုရင်တော့ ဆက်လက်ပေါင်းသင်းဖို့သင့်မသင့် သင်ကိုယ်တိုင်စဉ်းစားဆင်ခြင်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သင်နဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်အတွေးတွေရှိတဲ့ လူတွေနဲ့သင့်ရဲ့အချိန်တွေကိုဆက်ပြီး ကုန်ဆုံးနေမယ်ဆိုရင် သင့်စိတ်ကူးအိမ်မက်တွေကို ဘယ်တော့မှလက်လှမ်းမှီနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ WWE ချန်ပီယံဟောင်းဖြစ်သူ၊ လက်ရှိမှာတော့စိတ်ဓာတ်မြင့်တင်ရေး စာပေဟောပြောသူ Marc Mero ရဲ့ဟောပြောပွဲတစ်ခုမှာလည်း သူ့ရဲ့ဘဝဇာတ်ကြောင်းကိုအခြေခံပြီး အပေါင်းအသင်းမမှားအောင် ကိုယ့်ကိုကိုယ် စဉ်းစားဆုံးဖြတ်တတ်ဖို့နဲ့ အချိန်မလွန်ခင် မိမိတို့အနားမှာရှိတဲ့လူတွေကို အချိန်ပေးပြီးဂရုစိုက်ဖို့ပြောသွားပါတယ်။ အဲဒီ (၅) မိနစ်လောက်စာ ဗီဒီယိုလေးထဲမှာ Marc က “ကျွန်တော်တို့တွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝကို ဆုံးဖြတ်ပေးနေပါတယ်။ တံငါနားနီးတံငါ၊ မုဆိုးနားနီးမုဆိုး ဆိုသလိုဘဲ လူလိမ္မာနဲ့ပေါင်းရင်တော့ ယဉ်ကျေးလိမ္မာမှာဖြစ်ပြီး လူမိုက်နဲ့ပေါင်းမိရင်တော့ မကောင်းတာတွေကိုပဲ ခံစားရပါလိမ့်မယ်။ အဲဒါကြောင့် သင်တို့ပေါင်းသင်းနေတဲ့ လူတွေကို ကျွန်တော့်ကိုလာပြမယ်ဆိုရင် သင့်ရဲ့အနာဂတ်နဲ့ သင်ဘယ်လိုလူဖြစ်လဲဆိုတာ ကျွန်တော်ပြောပြပါ့မယ်” လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ ဗီဒီယိုလေးကို ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Marc Mero ရဲ့ဒီ YouTube link လေးမှာ သွားပြီးကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့တွေက တစ်ယောက်တည်းရှင်သန်ရပ်တည်ဖို့ ခက်ခဲတာဖြစ်တဲ့အတွက် အမြဲအစုအဖွဲ့၊ အပေါင်းအသင်းများနဲ့ အတူတကွရှိတတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့အမြဲ ပေါင်းလေ့ရှိတဲ့လူတွေက ကျွန်တော်တို့ဘဝလမ်းကြောင်းကို ပြောင်းလဲစေတဲ့နေရာမှာ အနည်းနဲ့အများ ပါ၀င်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက် သင်တို့ပေါင်းလေ့ရှိတဲ့လူတွေဟာ သင်တို့ဘဝလမ်းကြောင်းကိုတိုးတက်စေနိုင်သလား၊ သင်တို့ဖြစ်ချင်တဲ့အရာတွေကို လက်ခံနားလည်ပေးပြီး အထောက်အပံ့ပေးနိုင်သလား ဆိုတာတွေကိုတော့ အမြဲဆန်းစစ်နေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သင်ကိုယ်တိုင်ကလည်း ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်ချင်နေသလဲ၊ သင့်ရဲ့ဘဝမှာဘယ်လို စံနှုန်းမျိုးကိုရယူချင်တာလဲ ဆိုတာကိုတော့ သိထားဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ နန ...
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာ တစ်စုံတစ်ခုကိုစတင်ဖို့ ဘယ်တော့မှနောက်ကျတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့တွေရဲ့ တီထွင်ကြံဆနိုင်စွမ်းတွေဟာ အသက်အရွယ်အလိုက် ကန့်သတ်ထားတာမျိုးမရှိတဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ တစ်စုံတစ်ရာကို စတင်လိုက်ဖို့ ဘယ်တော့မှနောက်ကျမနေပါဘူး။ လူတော်တော်များများက အသက်အရွယ်ရလာတာနဲ့အမျှ ကိုယ်မလုပ်ခဲ့ရတဲ့အရာတွေ၊ အိမ်မက်တွေကို ပြန်တွေးပြီး နောင်တရနေတတ်ကြပါတယ်။ အဲဒါဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ဒီလိုတွေးနေတာမျိုးကို ရပ်လိုက်ပြီး ကျွန်တော်တို့လုပ်ချင်နေတဲ့အရာတွေ၊ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အိပ်မက်တွေကို ခုချက်ချင်းပဲ လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်သင့်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့တွေအကုန်လုံးက ကိုယ့်အချိန်နဲ့ကိုယ် သွားလာနေကြတာကြောင့် ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝပန်းတိုင်တွေ၊ အိပ်မက်တွေကို အကောင်အထည်ဖော်ဖို့အတွက်ကတော့ ဘယ်တော့မှနောက်ကျနေတယ်ဆိုတာ မရှိပါဘူး။ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှာတော့ KFC နဲ့ Alibaba ဆိုတာကိုကြားလိုက်တာနဲ့ မသိတဲ့သူမရှိသလောက်ပါဘဲ။ ဒီလိုမျိုး လူတော်တော်များများ သိကြလောက်အောင် ထင်ရှားပြီးအောင်မြင်နေကြတဲ့ လုပ်ငန်းတွေကိုတည်ထောင်ခဲ့တဲ့ ကာနယ် ဟာလန်းဒ် ဒေးဗစ်ဒ် ဆန်ဒါးစ် (Colonel Harland David Sanders) နဲ့ ဂျက်မား (Jack Ma) တို့ရဲ့ သူတို့ဘဝလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်လုံးမှာ တွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့ အခက်အခဲတွေနဲ့ နေရာပေါင်းစုံကနေ ငြင်းပယ်ခံခဲ့ရတာတွေကို ဘယ်လိုမျိုးလက်မလျှော့ဘဲ ဆက်ပြီးကြိုးစားခဲ့ရတာတွေကို အနည်းငယ်လောက်ဖော်ပြချင်ပါတယ်။ သင်တို့ရဲ့ဘဝထဲမှာလုပ်ကိုင်သမျှ မအောင်မြင်လို့စိတ်ဓာတ်ကျနေတယ်ဆိုရင်တော့ KFC သူဌေးကြီး ကာနယ်ဆန်ဒါးစ်ကို သတိရလိုက်ပါ။ သူဟာ လုပ်ငန်းပေါင်းများစွာလုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး ကျရှုံးမှုပေါင်းများစွာနဲ့လည်း ကြုံတွေ့ဖူးသူတစ်ယောက်ပါ။ သူ့အသက် ၆နှစ်အရွယ်မှာ သူတို့ဖခင်ဆုံးပါးသွားခဲ့တာကြောင့် (၇) တန်းလောက်မှာကတည်းက ကျောင်းထွက်ပြီးအလုပ်ပေါင်းများစွာကို လုပ်ကိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ သူ့အသက် (၁၆) နှစ်မှာတော့ စစ်တပ်ထဲကိုဝင်ပြီး စစ်မှုထမ်းခဲ့ပါတယ်။ တစ်နှစ်အကြာမှာတော့ တပ်ထဲကနေ ထွက်ခွာခဲ့ရပြီး အခြားအလုပ် (၄) မျိုးလောက်အထိ ရှာဖွေလုပ်ကိုင်ခဲ့ပေမယ့် မအောင်မြင်ခဲ့ပြန်ပါဘူး။ သူ့အသက် (၄၀) မတိုင်ခင်အချိန်အထိ ကြက်ကြော်ဆိုင်ဖွင့်ပြီး လုပ်ကိုင်ခဲ့ပေမယ့် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းမှာတော့ ပိတ်သိမ်းခဲ့ရပြန်ပါတယ်။ စစ်အတွင်းမှာပဲ သူကိုယ်တိုင်ကားမောင်းပြီး တစ်ဆိုင်ဝင်တစ်ဆိုင်ထွက် သူ့ရဲ့ကြက်ကြော် recipe ကိုလိုက်စပ်ခဲ့သော်လည်း အကြိမ်ပေါင်း (၁၀၀၉) ကြိမ်တိုင်တိုင်ငြင်းပယ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာတော့ သူ့ရဲ့ဘယ်လိုမှလက်မလျှော့ဘဲ ကြိုးစားပမ်းစားလုပ်ကိုင်ခဲ့တာတွေကြောင့် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံးမှာပါ လူသိများတဲ့ KFC ဆိုတဲ့ Fast Food စားသောက်ဆိုင်တွေကို တည်ထောင်နိုင်ပြီး အောင်မြင်မှုတွေရရှိစေခဲ့တာပဲဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုပဲ ဘယ်လောက်ပဲ ငြင်းပယ်ခံရခံရ လက်မလျှော့ဘဲ ဆက်ကြိုးစားပြီး အောင်မြင်မှုတွေရရှိခဲ့တဲ့ Alibaba ရဲ့ပဲ့ကိုင်ရှင် ဂျက်မား(Jack Ma) ရဲ့ဘဝဇာတ်ကြောင်းကလည်း သင်တို့ဘဝမှာ ကျရှုံးမှုတွေနဲ့တွေ့ကြုံရတိုင်း အမှတ်တရဖြစ်နေသင့်တဲ့ အရာတစ်ခုလို့ဆိုရင် မမှားနိုင်ပါဘူး။ ယခု တရုတ်နိုင်ငံမှာ အချမ်းသာဆုံးလူလို့တောင် ပြောလို့ရနိင်တဲ့ ဂျက်မားရဲ့ဘဝမှာတော့ ငယ်စဉ်အချိန်မှာကတည်းက ငြင်းပယ်ခံရမှုတွေများစွာက နေရာယူထားပါတယ်။ ငယ်စဉ်ကတည်းက ပညာရေးအနေနဲ့ မူလတန်း (၂) ခါကျခဲ့ပြီး အလယ်တန်းကိုလည်း (၃) ခါတိတိကျခဲ့ပါတယ်။ တက္ကသိုလ်မှာလည်း ၃နှစ်လောက် တက်လိုက်ကျလိုက်ပါပဲ။ သူ Harvard တက္ကသိုလ်ကိုတက်ရောက်ဖို့ (၁၀) ကြိမ်တိုင်တိုင် သွားလျှောက်ခဲ့ပေမယ့် ငြင်းပယ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် အလုပ်လျှောက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့် အလုပ်ပေါင်း (၃၀) လောက်ကနေ အငြင်းခံခဲ့ရတယ်။ အဲဒါအပြင် KFC တရုတ်နိုင်ငံမှာလာဖွင့်လို့ အလုပ်သွားလျှောက်တဲ့ ၂၄ယောက်ထဲမှာ သူမပါဘဲ ကျန်တဲ့ ၂၃ယောက်ပဲ အရွေးခံခဲ့ရတယ်။ ရဲတပ်ဖွဲ့မှာလျှောက်တဲ့ ၅ယောက်ထဲမှာလည်း ရွေးတဲ့၄ယောက်ထဲ သူမပါခဲ့ပြန်ဘူး။ ဒါပေမယ့် ဘယ်လောက်ပဲအငြင်းခံရခံရ သူဘယ်တော့မှအလျှော့မပေးဘဲ ဆက်ကြိုးစားခဲ့တဲ့အတွက် လူ၁၈ယောက်လောက်နဲ့ သူ့အိမ်မှာတင်စတင်ခဲ့တဲ့ Alibaba ကုမ္ပဏီဟာအခုဆိုရင် ကမ္ဘာပေါ်မှာ မသိတဲ့လူ သိပ်မရှိလောက်တဲ့အထိ ထင်ရှားကြော်ကြားတဲ့ E-commerce ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုအဖြစ် အောင်မြင်လာခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင်သူတို့မအောင်မြင်သေးခင် ကျရှုံးမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ အချိန်တွေမှာရော? အဲဒီအချိန်တွေမှာလည်း သူတို့ထက်သာလွန်နေတဲ့လူတွေ ရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ကတော့ အခြားသူတွေနဲ့ကိုယ့်ကိုကိုယ် နှိုင်းယှဉ်ဖို့ထက် မိမိတို့အရှုံးကိုရင်ဆိုင်လက်ခံပြီး အလျှော့မပေးဘဲ ထပ်ခါထပ်ခါကြိုးစားခဲ့တာကြောင့် အခုလိုအောင်မြင်မှုတွေကို ရရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးက ကိုယ့်အချိန်နဲ့ကိုယ် လည်ပတ်နေကြတာပါ။ အဲဒါကြောင့် အဆင်မပြေတာတွေ၊ အရှုံးတွေနဲ့ ကြုံတွေ့ရတဲ့အခါတွေမှာ ကျွန်တော်တို့ထက်သာနေတဲ့သူတွေနဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်နှိုင်းယှဉ်ပြီး လက်လျှော့မယ့်အစား ဇွဲရှိရှိတဲ့ဆက်လက်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင် တစ်ချိန်တုန်းက သင့်ထက်သာနေတဲ့သူတွေ ထက်ပိုပြီးကြီးမားတဲ့ အောင်မြင်မှုတွေကို ရရှိနိုင်လာမှာပါ။ ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးရဲ့ ဘဝတွေက ဘယ်တော့မှ ပြည့်စုံတယ်ဆိုတာမျိုးမရှိပါဘူး ။ ဘဝတိုင်းဟာ တစ်ခါတလေမှာ သာယာလှပပြီး တစ်ခါတလေမှာတော့ ရှုပ်ထွေးကြမ်းတမ်းပြီး ခဲယဉ်းတတ်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ဘဝမှာ အောင်မြင်မှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတတ်သလို ရှုံးနိမ့်မှုတွေနဲ့လည်း ရင်ဆိုင်ကြရမှာပါ။ ဘယ်လိုတွေပဲ ရှုံးနိမ့်မှုတွေနဲ့ ကြုံတွေ့ရပါစေ သင်တို့ရဲ့အိမ်မက်တွေ၊ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်တွေအတွက် လက်မလျှော့ဘဲ ဆက်ကြိုးစားနေမယ်ဆိုရင်တော့ တစ်ချိန်ချိန်မှာသင့်အတွက် အောင်မြင်တဲ့အချိန်ကို ရောက်လာပါလိမ့်မယ်။အဲဒါကြောင့် မိမိတို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်တွေ၊ အိပ်မက်တွေကို အောင်အောင်မြင်မြင် ရောက်ရှိနိုင်ဖို့အတွက် အခြေအနေ၊ အချိန်အခါရွေးမနေဘဲ အခုချက်ချင်းစတင်လိုက်ပါ။ ...
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အသားယူခံရမှုဟာ အမျိုးသမီးအများစု ကြုံတွေ့လေ့ရှိတဲ့ ပြဿနာတစ်ရပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုအဖြစ်တွေ ကြုံတွေ့ရတဲ့အခါမှာ ကာယကံရှင်တွေအနေနဲ့ ဖွင့်ဟပြောဆိုဖို့ ဝန်လေးတတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် The Fit Slay Queens အဖွဲ့ဝင်ထဲက Princess Khine ကတော့ သူမ လတ်တလော ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ Sexual Harassment အကြောင်းကို အခုလို ဖွင့်ပြောထားတာ တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ “အဲဒီ နှာဘူးကောင်ကို ငါတစ်ခုခုပြောခဲ့သင့်တာ” ယောကျ်ားလေးတစ်ယောက် အသားယူတာခံခဲ့ဖူးတဲ့ မိန်းကလေးတိုင်း စိတ်ထဲမှာ အဲဒီလို အကြိမ်တစ်ထောင် လောက်တွေးမိမယ်ထင်ပါတယ်၊ ဆတ်ဆတ်ကြဲတွေ ဆိုရင်တော့ ထီးနဲ့ပါ ရိုက်ပြီးသားဖြစ်နိုင်ပေမယ့် ကိုယ်ကျတော့ ရိုက်ဖို့နေနေသာသာ ရုတ်တရက်ကြုံလိုက်ရတော့ တော်တော်ထူပူသွားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီအတိုင်းလည်း ငြိမ်မခံနိုင်လို့ ပြီးတော့ ကိုယ့်လို ခံလိုက်ရတဲ့ မိန်းကလေးတွေရော ဘယ်လိုမျိုးတွေ ဖြေရှင်းကြလဲဆိုတာကို သိချင်လို့ ဒီအဖြစ်ကို share လိုက်တာပါ။ ဒီစာကိုဖတ်နေတဲ့ အစ်မတွေ ညီမတွေဆီက sexual harassment နဲ့ ပတ်သက်တဲ့အမြင်ကိုလည်း သိချင်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒီိလိိုမျိုးကြုံဖူးတာ ကို်ယ်တစ်ယောက်တည်း မဟုတ်လောက်ဘူး ထင်လို့ပါ။ ဟိုတစ်ရက်က မြန်မာပလာဇာကို မာမားနဲ့ အတူသွားခဲ့ပါတယ်။ ဓာတ်လှေကားထဲဝင်ခါနီးမှာ မျက်နှာချင်းဆိုင်က လာနေတဲ့ ယောကျ်ားလေး နှစ်ယောက်က ဝင်တိုက်တာ ခံလို်က်ရပါတယ်။ ရုတ်တရတ်ဆိုတော့ တမင်ပဲဝင်တိုက်တာလား မတော်တဆတိုက်မိတာပဲလားကို ချက်ချင်းမသိလိုက်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သေချာတာတစ်ခုကတော့ ကောင်လေးတစ်ယောက်ရဲ့ လက်က ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်က နေရာတစ်ခုကို လာထိသွားပါတယ်။ အဲဒါကတော့ မတော်တဆ မဟုတ်တာ လုံးဝသေချာသွားလို့ သူတို့ကို လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ သူတို့နှစ်ယောက်လုံးရဲ့ အကြည့်နဲ့ မျက်နှာပေးက “ဟားဟား… မင်းဒေါသထွက်သွားလား? ဒေါသထွက်သွားလည်း မတတ်နိုင်ဘူး။ မင်းလို မိန်းကလေးက ဒီနေရာမှာ ငါတို့ကို ဘာမှ ပြန်လုပ်လို့ မရပါဘူးကွာ။” ဆိုတဲ့ အကြည့် နဲ့ မျက်နှာပေးတွေပါ။ ရုတ်တရက်မို့ ကြောင်သွားတာရော ဒေါသထွက်တာရောပေါင်းပြီး ဘာမှ မလုပ်လိုက်ရဘဲနဲ့ ဒေါသတွေပဲ အရမ်းထွက်ပြီး ကျန်ခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ရုပ်တွေက နောင်တရဖို့ဝေလာဝေး ငါဒီထက်ပိုကိုင်လိုက်ရ ကောင်းသားဆိုတဲ့ ပြီတီတီရုပ်တွေနဲ့ပါ။ နဂို အံ့အားသင့်ဒေါသထွက်နေတဲ့စိတ်ကနေ ရွံရှာတဲ့စိတ်၊ ဒီလိုလူမျိုးတွေက ငါ့အသားကိုထိသွားလေခြင်းဆိုပြီး ၀မ်းနည်းတဲ့စိတ်တွေအဖြစ် ပြောင်းသွားပါတယ်။ ဒီအဖြစ်အပျက်မှာ ပထမဆုံး ခံစားခဲ့ရတာက ရှက်ကြောက်ရွံရှာစိတ်ပါ။ ကိုယ့်ဘာသာလည်း ပြန်စဉ်းစားမိတယ်။ ကိုယ် ၀တ်တာစားတာများ လျှပ်ပေါ်လော်လီ ဖြစ်နေလို့လားပေါ့။ အဲဒီနေ့က ၀တ်ထားတာက ဒူးဖုံးတဲ့ဂါ၀န်ပွပွလေးပါ။ နေရာကလည်း လူတွေ အများကြီး လာနေတဲ့ Myanmar Plaza… ပြီးတော့ ဘေးမှာ အမေတစ်ယောက်လုံးလည်းပါနေပါတယ်။ သေချာပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့ ကိုယ့်ဘက်က မမှားပါဘူး။ လူတစ်ယောက်မှာ ကိုယ်ကြိုက်တာ ကိုယ်ဝတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတာလည်း လက်ခံပါတယ်။ ကိိုယ့်နိုင်ငံယဉ်ကျေးမှုအရ နေရာဒေသအလိုက် ၀တ်စားဆင်ယင်တာမျိုး ရှိတာက လွဲရင်ပေါ့။ ကိုယ့်စိတ်ကိုလည်း ကိုယ် ပြန်ဆန်းစစ်မိတယ်။ ငါဘာလို့များ အမှားကို ငါ့ဆီမှာအရင်စရှာနေမိပါလိမ့်လို့။ ဒီနေရာမှာ အနောက်နိုင်ငံက မိ််န်းကလေးတစ်ယောက်ဆိုရင် သူ့ဘာသာ two piece ၀တ်ထားပါစေဦး… ငါ၀တ်တာများ မှားနေလို့လားလို့ တွေးမိမယ်မထင်ပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူတို့ဆီမှာနဲ့ မတူတာက ဒီက society မှာ ခံရတဲ့ဘက်ကို ဖိပြောတဲ့ (victim blaming) ပိုများနေပြီး သူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက်မျှတတဲ့တွေးခေါ်ပေးမှုနဲ့ တကယ်မှားနေတဲ့ အကြောင်းရင်းကို ဂရုပြုမှု (awareness) နည်းနေပါသေးတယ်။ တချို့ မိန်းကလေးတွေ ကြုံဖူးမှာပါ။ သူတို့ အစခံရကြောင်း လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအစော်ကားခံရကြောင်း (ဥပမာ တမင်ဝင်တိုက်ပြီးအသားယူသွားတာ) အိမ်ကိုပြောပြတဲ့အခါ သူတို့ ပြန်ကြားရတတ်တာက “နင်ကိုက လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ရှေ့ ဖြတ်လျှောက်တာကိုး”၊ “နင်ကိုက စကတ်တိုနံ့နံ့ဝတ်တာကိုး”၊ “သူတို့တွေနဲ့ ပြိုင်ပြီး ရန်မဖြစ်နဲ့။ နင့်ကို တစ်ခုခု လုပ်သွားရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ သည်းခံလိုက်” စတာတွေကို ကြားရတတ်ပါလိမ့်မယ်။ အနည်းစုပေါ့။ အများစုကတော့… နောက်ဆို သတိထားသွားဖို့၊ အတိုအပြတ်မဝတ်ဖို့ အပြောခံရပါလိမ့်မယ်။ မိသားစုဝင်တွေက ကိုယ့်ကိုစိတ်ပူလို့၊ ဂရုစိုက်လို့ပြောတာမှန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါမိန်းကလေးတွေရဲ့ လွတ်လပ်ခွင့်ပါ။ မိန်းကလေးတွေချည်း ဆင်ခြင်သင့်တဲ့ကိစ္စလို့လည်း မထင်မိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ များသောအားဖြင့် မိန်းကလေးတွေကို ဆင်ခြင်သင့်ကြောင်းပြောတာပဲ များပါလိမ့်မယ်။ ယောကျ်ားလေးတွေကို ဒီလိုမျိုး မလုပ်သင့်ကြောင်း တခုတ်တရရှင်းပြမယ့်သူရှားနေပါတယ်။ Sexual harassment မှ မဟုတ်ပါဘူး။ အခု လတ်တလော ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ ရေခဲတောင်ခရီးစဉ်မှာ ခြေချော်ပြီး အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ မစိမ့်ထက်ရဲ့ ကိစ္စကိုပဲကြည့်ပါ။ Comment တစ်ခုမှာဖတ်လိုက်ရပါတယ်။ “တောင်တက်တယ်ဆိုတာ မိန်းကလေး လုပ်စရာလား?” ဆိုပြီးတော့ပေါ့။ မိန်းကလေးတစ်ယောက် စွန့်စားချင်တာကောင်းတဲ့ကိစ္စတစ်ခုပါ။ အားလုံး အတူကူညီဖန်တီးပေးရမှာက မိန်းကလေးတွေအတွက် safe ဖြစ်တဲ့ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုကို တည်ဆောက်ပေးဖို့ပါ။ ဒါမှတကယ် ပြဿနာဖြစ်စေတဲ့ အရာတွေကို အတူပူးပေါင်းဖြေရှင်းလို့ရမှာပါ။ ကိုယ်တွေ့ကြုံလိုက်ရတဲ့ အဖြစ်မျိုးတွေ၊ ကာယကံမြောက် အစော်ကားခံလိုက်ရတာမျိုးတွေမှ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အစော်ကားခံရခြင်း (sexual harassment) လို့ သတ်မှတ်လို့ရတာမဟုတ်ပါဘူး။ ကာယကံမြောက်စော်ကားမှုမျိုးသာမက sexual harassment လို့ ပြောနိုင်တဲ့ အပြုအမူတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဥပမာ ကိုယ်လမ်းဖြတ်လျှောက်သွားတဲ့အချိန်မှာ ရိသဲ့သဲ့ လုပ်ချင်တဲ့သဘောနဲ့ လေချွန်ပြီး အစခံလိုက်ရတာမျိုး၊ စကားလုံးတွေနဲ့ ရိသဲ့သဲ့စတာမျိုး၊ မျက်နှာအမူအရာနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် မိန်းကလေးတွေ စိတ်ထဲမှာ မသက်မသာ ခံစားမိစေတဲ့အမူအရာမျိုး (ဥပမာ နမ်းတဲ့ပုံ လုပ်ပြလိုက်တာ) မျိုးတွေလည်း ပါပါတယ်။ မိန်းကလေးတွေ ဒီလိုမျိုး ကြုံရတဲ့အခါ သိစေချင်တာက ဒါ အဆင်မပြေပါဘူး။ လက်ခံသင့်တဲ့ အပြုအမူမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို ဒီလိို်မျိုးဆက်ဆံတာမျိုးဟာ ရှုံ့ချစရာ၊ ရှက်စရာ ဖြစ်ကြောင်းကို တစ်နည်းနည်းနဲ့ ဖော်ပြခဲ့သင့်တာပါ။ ကိုယ်ကြုံခဲ့တုန်းက ဘာမှ မလုပ်နိုင်ခဲ့လိုက်နိုင်ပေမယ့် ကိုယ့်လို ထပ်ကြုံရမယ့် မိန်းကလေးတွေများ ရှိခဲ့ရင် ကြောက်လို့ ရှက်လို့ ဘာမှမတုံ့ပြန်လို်က်ရတာမျိုး မဖြစ်ရလေအောင် ပြောပြချင်တာပါ။ တချို့ group တွေမှာ မိန်းကလေးတွေ ရင်ဖွင့်တာတွေလည်း တွေ့ဖူးပါတယ်။ ကိုယ်ဘာမှမတုံ့ပြန်နိုင်ခဲ့တဲ့ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာ ဘေးကလူတွေ လုပ်ပေးနို်င်တာက ဒီလိုအပြုအမူတွေဟာ လူတစ်ဖက်သားကို စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စေတယ်ဆိုတာရယ်၊ ဒီလိုအပြုအမူတွေကို တွေ့တိုင်း အားလုံး ဝိုင်းပြီး ရှုံ့ချ action ယူသင့်တယ်ဆိုတာရယ်ကို လူတွေကြားထဲ ကျယ်ပြန့်သထက် ကျယ်ပြန့်လာအောင် ဝိုင်းဝန်းလုပ်ဆောင်ပေးကြရမှာပါ။ ဒီကောင်မလေး ဒါမျိုးပြုမူခံရအောင် ဘယ်လိုများ ဝတ်စားဆင်ယင်ပြုမူနေထိုင်နေလဲမှ မသိတာ ဆိုတာထက် ဘယ်လိုကောင်မျိုးက ဒီလိုမကောင်းတဲ့ အပြုအမူမျိုးလုပ်လိုက်ပါလိမ့်ဆိုပြီး တွေးလာတတ်ဖို့ အရင် လုပ်ဆောင်ကြရမှာပါ။ မိန်းကလေးထုထဲမှာသာမက ယောက်ျားလေးတွေနဲ့ လူ့ပတ်ဝန်းကျင်ကပါ ဒါမျိုးပြုမူသူကို ရှုံ့ချစရာ၊ ရှက်စရာ အဖြစ်မြင်လာတဲ့အထိ လုပ်ဆောင်ကြရမှာပါ။ အခုရေးတော့သာ ပေါ့ပေ့ါပါးပါး ရေးနိုင်တာပါ။ ဖြစ်စကဆို တော်တော်ဝမ်းနည်းတာပါ။ နောက်မှသာ “ကိုယ် ရှက်ရမှာထက် …. လုပ်တဲ့သူတွေသာ ရှက်ရမှာ” ဆိုပြီးတွေးမိလာတာပါ။ ရှက်ကြောက် ၀မ်းနည်းဖြစ်တာ မှန်ပေမယ့် ဒီအဖြစ်ကို ပြုမူခံရသူရဲ့ စိတ်ထဲမှာတွေးနေတာက ကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့ ပျော်ရွှင်သင့်တဲ့ အချိန်တွေနစ်နာပါတယ်။ ဒီတော့ ဒီအဖြစ်ကြောင့် ကိုယ့်ကိုုကိုယ် ငါဘာမှားနေလဲ ဆိုပြီးလည်းမတွေးတော့ပါဘူး။ ဒီလိုကိစ္စမျိုးကို ကိုယ်သာမကဘဲ တခြားအမျိုးသမီးတွေလည်း တစ်နည်းနည်းနဲ့ sexual harassment လုပ်ခံရဖူးမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ကြုံတွေ့ရတဲ့အခါ victim ဖြစ်တာ ရှက်စရာလို့မမြင်ဘဲ ပြုလုပ်သူသာ ရှက်သင့်ကြောင်း ၀ို်င်းဝန်းရှုံ့ချပေးမယ့်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခု တည်ဆောက်နိုင်ကြဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ Being sexually harassed is not ok at all. We are not wrong to be ourselves. We cannot let it affect our lives. ...